Nezvedu - Gepair mesh
Gepairmesh inotarisa zvakanyanya pakugadzika kwesimbi mesh dhizaini uye kugadzira, iyo ine makore makumi maviri ruzivo mundima iyi. Flexible simbi isina waya waya tambo mesh, waya yemahara mesh, iri mhando mesh yakagadzirwa nemaoko inoshandiswa zvakanyanya mu zoo mesh yakavharirwa, shiri ndege, nhanho, girazi rusununguko inox tambo system uye kudzikisira, kushongedza uye art tambo mesh, balustrade uye tambo njanji. balcony mesh, kuchengetedza uye kuwa kwekudzivirira system.
Flexible mesh yekushongedza, isu tine simbi mesh machira, yakawedzera simbi mesh, ketani yekushongedza hovhheni mesh, architidziro ekushongedza simbi yescreen uye facades, nezvimwe.
Vashandi vedu vefekitori vakanyatsodzidziswa uye vane hunyanzvi mumunda wezvakagadzirwa nesainzi simbi yakarukwa. Isu tine yakasimba kwazvo QC system uye tarisisai zvisati zvaitika, panguva uye mushure mesh kugadzirwa. Mumakore apfuura, isu tinogara tichiwana ruzivo rwakakosha pane kugadzirwa nekutengesa, uye kune makuru makuru ekugadzira, kutengesa uye shure-kwekutengesa sevhisi. Zvigadzirwa zvedu zvakaratidzwa mumisika yeAustralia, USA, France, Spain, Mexico, Denmark, Sweden, Japan, South Korea, India, Singapore, Kuwait. Mukuwirirana nechinangwa icho chaigara nechikwereti, chakagadziridzwa nemhando, Gepair Mesh anogamuchira kushandira pamwe kubva pasirese yepasi pekubatana kuvimbika kushambadzira kudyidzana!
Chinangwa •Kuti uve mutungamiri mune inoomesesa mesh indasitiri nekupa yepamusoro vanokwanisa mesh zvigadzirwa, yakawedzerwa masevhisi, hukama uye purofiti. Kura pamwe chete nevatengi vedu vanoremekedzwa pasi rese.
Chiono •Kupa mabasa akanaka anopfuura zvinotarisirwa nevatengi vedu vanoremekedzwa.
Mission •Kuvaka hukama hwakareba nevatengi vedu uye vatengi uye nekupa akasiyana evatengi masevhisi nekutsvaga bhizinesi kuburikidza nehunyanzvi uye hwepamberi hwehunyanzvi.
Core values ​​• Isu tinotenda mukubata vatengi vedu neruremekedzo uye nekutenda; Isu tinokura kuburikidza nekugadzira, kutanga uye hunyanzvi, Isu tinobatanidza kutendeseka, kuvimbika uye tsika dzebhizinesi mune zvese zvikamu zvebhizinesi redu rekushanda.